Liverpool oo garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaaday kooxda Sheffield United… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye October 24, 2020
(Liverpool) 24 Okt 2020. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaaday kooxda Sheffield United, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan qeyb ka ahaa Isbuuca Shanaad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen kooxaha Liverpool iyo Sheffield United.
Daqiiqadii 13-aad kooxda Sheffield United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu gool u badelay Sander Berge rigoore kooxdiisa loo dhigay.
Laakiin daqiiqadii 44-aad Liverpool ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay ciyaarta xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino.
Daqiiqadii 64-aad Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 2-1 ka dhigay xiddiga reer Portugal ee Diogo Jota, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Sadio Mane.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 ay Liverpool kaga adkaatay kooxda Sheffield United oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, kaddib markii ay wada ciyaareen kulan xiiso badan oo qeyb ka ahaa Isbuuca Shanaad ee horyaalka Premier League.